Falanqeynta Kulanka Adag Leicester City Vs Liverpool Ee Horyaalka Premier League
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqeynta Kulanka Adag Leicester City Vs Liverpool ee Horyaalka Premier League
Kooxda Liverpool ayaa mar kale wajaheysa Waqtigeeda ugu adkaa kadib marka ay booqasho ugu tagto Kooxda Leicester City xili kulamadii ugu danbeeyay ay guul daro la kulantay.
Kulanka Leicester City Vs Liverpool
Saacada 15:30 pm Waqtiga Somaliya
Daafaca buuxa ee kooxda Leicester James Justin ayaa la filayaa inuu seego inta ka harsan xilli ciyaareedkaan ka dib dhaawac halis ah oo jilibka ka soo gaaray intii lagu jiray kulankii FA Cup ee ay ka badiyeen Brighton.
Timothy Castagne, Dennis Praet iyo Wesley Fofana ayaa dhamaantood wali dhaawac ku maqan.
Liverpool waxaa ka maqan Fabinho sababtoo ah dhaawac muruqa ah ayaa soo gaaray.
Saxiixyada kala ah Ben Davies iyo Ozan Kabak labaduba waa la heli karaa waana la tixgelinayaa, in kasta oo tababare Jurgen Klopp aanu daacad ka ahayn inuu midkoodna ku soo bilaaban doono iyo in kale.
Liverpool ayaa badisay 12 ka mid ah 17kii kulan ee ugu danbeysay ee horyaalka, oo ay ku jiraan lix ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeysay.
Leicester ayaa laga badiyay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay garoonkooda kula ciyaareen Reds.
Guushii ugu dambeysay ee Liecester city waxay ahayd 3-1 bishii Febraayo 2017.
Waaxaa soo gaaray shan guuldarro sagaal kulan oo tartan rasmiga ah Liverpool inta lagu guda jiray 2021. Waxay guuleysteen seddex jeer halna barbaro.